Madaxweyne Farmaajo: Saaxiibkeyow mar i maqal ka hor inta aadan hor-tegin Baarlamaanka – Kalfadhi
Saaxiibow taariikhdu waa isa soo celcelisaa ee aan ku xusuusiyo dhacdo aan xusuusteyda ka go’in. Alle ha u naxariistee Ganacsade Cumar Ganey oo ay Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Alle ha u naxariistee saaxiibbo ahaayeen mudo 50 sano ah ayaa Madaxtooyada ugu tegay Maxamed Siyaad markii ay Muqdisho xabaddu ka billaabatay Dec 1990.
Wuxuu ku yiri “Maxamed Siyaadow waxaan saaxiibbo nahay 50 sano, intii aad Madaxweynaha aheydna waligey xil, hanti iyo dan ii gaar ah kuuguma i maan. Maanta waxaa gurigayga iga keenay lexajeclada adiga iyo dalkaba iga kiin heysa, ee fadlan dalka iyo dadka badbaadi oo banneey kursigaan dabka ku shidan yahay, oo damacaada ha u burburin dalkaada. Maxamed Siyaad dheg jalaq uma siin codsigii iyo taladii Cumar Ganey.
Waxaanse hubaa in uu ka qoomameeyay in uu ka dhego-adeygay talada saaxiibkiis markii bil kadib Madaxtooyada looga saaray ee uu duurka galay, kadiba uu isagoo qaxooti ah ku geeriyooday dalka Nigeria.
Dad badan oo aan ka mid ahay oo ka walwalsan mustaqbalka dalka ayaa sugaya khudbadda aad sabtida ka horjeedin doonto Golaha Shacabka. Waxaa laga yaabaa in ay noqoto fursaddii ugu dambaysay ee aad shacabka kula hadleyso iyadoo hadalkaadu xiiso leeyahay. Waxaan kaa rajaynayaa in aad qaadato go’aan xilkasnimo ku dheehan tahay, oo aad ka dhigato khudbad sagootin iyo rajo-soo-celin ah, oo aad dib ugu soo nooleyso qalbiyada quustay. Ayna noqoto khudbad dhegaha shacabka ku harto oo lagugu soo xusuusto, Muqdishana dib ugu soo celiso hooyooyinka qaxay.
Khudbadahaaadii ugu dambeeyay waxaan kaa arkay dhaqan aanan kugu aqoonin oo ah in aad dad kale eedeyso. Si aad u sheegto in aad saxan tahay kuma qasbanid in aad dad kale eedeyso. In aad qaladka qirtana waa gobannimo. Waxaan kaa filayaa in aad fursaddaan uga faa’iideysato in aad shacabka Soomaaliyeed ka raalligeliso qalad kasta oo kaa dhacay intii aad masiirkooda jaangoynaysay.
Waxaana rajaynayaa in aad taariikhda wax ka barato oo aadan taladeyga uga dhega-adeygin sidii uu Maxamed Siyaad Barre dhegaha ku fureystay taladii saaxiibkiis Cumar Ganey.
Abdulahi Nur Colombo
Fiiro Gaar ah: Sawirka ninka geeska u xiga ee shaarka madow waa Maxamud Makis oo ka mid ahaan jirey qorayaasha Wargeyskii Xidigta Oktobar, waxaa ku xiga Madaxweyne Farmaajo,waxaa kusii xiga Amiin Caamir iyo Aniga.
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in dowladiisa ay dardar gelineyso ansixinta xeerarka iyo shuruucda la xiriira shaqaalaha